Ikhabhinethi EMNXENI wePaddy kwiLake James/Linville Gorge
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguClarissa
Ubekwe kude kwithafa lentaba labucala elibekwe kwiPaddy’s Creek epholileyo nepholileyo, ejikelezwe yiPisgah Nat’l Forest kunye neNdawo yoLondolozo lweZilwanyana zasendle...I-Oasis yakho yaBucala “yeKhabhinethi yaseCreekside” Ilindile! Ibekwe ecaleni kweLinville Gorge kunye nemizuzu kuphela ukusuka eScenic Lake James kunye nemibono ekufutshane kunye nokunyuka intaba kwiNtaba iMfutshane, iTable Rock kunye neNtaba yeHawksbill kunye neWiseman's View kunye neLinville Falls ... indawo yakho yendalo, ama-adventure kunye namathuba okuphumla maninzi.
Ikhabhini yeyakho iyonke ngexesha leholide yakho. Ikhaya lakho kude nekhaya. Ifakwe ngokungcamla kwaye ihonjiselwe intuthuzelo yakho kwindawo yabucala enqwenelekayo!
Ikhabhinethi imi ngqo ePaddy's Creek, umsinga weentaba ophuma kanye ePisgah Nat'l Forest enomda osemantla wendawo yekhabhinethi ikunika ukufikelela ngokuthe ngqo kokuhamba intaba. Kukho “umngxuma wokuqubha” omangalisayo kumgama omfutshane wokuhamba ngomlambo ukusuka ekhabhathini ngokunjalo. Khululeka kwiveranda yakho enkulu engasemva enezihlalo, okanye ifenitshala yangaphandle, lala kwi-hammock ngalo lonke ixesha umamele umsinga obalekayo kunye nesandi sendalo okanye ujonge phezulu enyangeni kunye neenkwenkwezi eziphefumlayo. Okanye uyonwabele ikofu yakho yasekuseni kumgangatho omkhulu ogqunywe ngaphambili umamele iintaka zicula kunye nelanga lifudumeza umphefumlo wakho.
Ikhabhinethi inomgangatho wepine hardwood kuyo yonke indawo kunye nethayile yeporcelain ekhitshini nakwigumbi lokuhlambela. Izincedisi ezingenastainless kunye neziMnyama ekhitshini eligcweleyo. Uvula ibhari yabantu aba-2 ejonge kwigumbi lokuhlala elikhulu elineesofa kunye nezitulo ezitofotofo apho uneTV eneRoku (akukho ziteshi zetv okanye isitya). Igumbi lokuhlala labelana ngendawo evulekileyo kwindawo yokutyela enetafile enkulu kunye nezitulo ezihamba epasejini engasemva kunye neengcango zaseFransi ezivulekele kumgangatho ongasemva.
Igumbi lokulala likaKumkanikazi labucala lingaphandle kwepaseji kwaye linomandlalo wepilllowtop okhululekileyo, isinxibo, iitafile ezisecaleni, ikhabhathi kunye nedesika/itafile encinci yekhompyuter.
Igumbi lokulala eliyi-Master labucala, ekupheleni kwepaseji, libonisa ibhedi enkulu ye-mahogany kunye nesikhumba se-King esileyi esinomandlalo we-10” we-Bamboo memory foam. Inezinxibo macala omabini kwaye inodonga oluxhonywe kwi-smart tv ukuze uyonwabele. Eli gumbi likwanetafile/idesika yekhompyutha kunye nezitulo zokuhlala.
I-WiFi eyomeleleyo yasimahla kuyo yonke ikhabhathi kodwa umqondiso weseli unokuba ngumzobo, ovumela umdlalo onemveliso okanye umsebenzi kodwa ube ungadityaniswanga ngaxeshanye.
Umbuki zindwendwe ngu- Clarissa
Sihlala kwipropathi kwaye ziyafumaneka kwiimfuno zakho kodwa ngenye indlela sikushiya ukonwabele indawo yakho.
Indlela eya ezantsi kwikhabhathi kwabelwana ngayo kwaye kukho ikhabhinethi yethu yokuhlala yabucala ethe kratya kumlanjana osuka kuwe ukuze ubone omnye umntu ngamaxesha ngamaxesha kwipropathi kodwa ikhabhathi yakhe ayibonakali kwikhabhathi yakho.
Indlela eya ezantsi kwikhabhathi kwabelwana ngayo kwaye ku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nebo